Ịchụ Mr Ceo - Lovemụ nwoke hụrụ n'anya - Bl - Bl Manga - Bl Webtoon - Yaoi - Yaoi Manga - Yaoi Hentai
Na-achụ Mr Ceo nkezi 3.4 / 5 si 19
NA / A, o nwere ihe nlere 63K
Comedy, Drama, mma, romance, Yaoi
Otaku Oh Deok-Hae, onye na-arụ ọrụ oge niile, onye na-ata ahụhụ n'oge na-adịbeghị anya.
Nke a bụ n'ihi na onye isi na ụlọ ọrụ ya dị ka onye ọkacha mmasị ya, Ken!
Oh Deok-Hae bụ onye otaku bụ onye ọrụ oge niile, ọ na-ata ahụhụ nke ukwuu n'oge na-adịbeghị anya.
Isi ihe kpatara nsogbu ya bụ onye isi ya nke yiri otu n'ime ndị ọkacha mmasị ya, Ken!
Mana onye isi ahụ, onye nwere ezinaụlọ mara mma, ihu mara mma, ụdị ejiji dị ịtụnanya, yana ezigbo ụkpụrụ ọrụ, ọ dị nwute, anaghị amasị Oh Deok-Hae.
Onye isi ahụ nwere ezinaụlọ mara mma, ihu mara mma, ụdị ejiji dị ịtụnanya, yana ezigbo ụkpụrụ ọrụ. Ọ dị nwute, enweghị mmasị na Oh Deok-Hae.
Onye isi ala, ọ dị m nwute.
Ka ụbọchị na-aga, Oh Deok-Hae kpebiri ịgba arụkwaghịm.
"Enweghị m ike iji uche adịghị ọcha a rụọ ọrụ ọzọ!"
Kedu ihe na-eme ebe a? Achọrọ m ịhapụ ọrụ m mana onye isi m achọghịkwa m?!
Akụkọ ịhụnanya na-akpali akpali nke mmadụ abụọ!
Uwasa Mba Midori-Kun !!
Ọba akwukwo choro amoosu
Sabi Mba Yume